Si kastaba ha ahaatee, 21 sano oo xukun milatari ka dib ayaa xoogii Kacaanka Umada Soomaaliya lagu khasbey ineey ka baxaan magaalo madaxda wadanaka midaasi ooy ka dambeeyeen ururo mucaarid iyo dagaalyahano qabiilo u dagaalamaya. Bishii Janaayo 26keedii ee 1991kii ayaa Jaale Maxamed Siyaad Barre ka degay maamulka iyo talada dowladii kacaanka ee ka talineeysay wadanka Soomaaliya, asaga oo wadanka ka baxay. Madaxweyne Siyaad Barre asagoo 75 sanno jir ah wuxuu ku geeriyooday magaalada Lagos ee wadanka Nayjeeriya bishii Oktoobar 26keedii sanadkii 1995kii. Marxuumka waxaa lagu aasay gobolka uu u dhashay ee Geddo.
Madaxweyne Maxamed Siyaad Barre oo yaraantiisiahaaa wiil yar oo reer baadiye ah ayaa markii ugu horeysay waxuu yimid Degmada Dhuusamareeb, wuxuuna uga sii gudbay magaalada Beledweyne, wuxuuna nasiib wanaag la kulmay askar halkaa lagu qoraayay oo uu ka mid noqday dadkii ciidamadii dhibowga 1936-dii ku galay xerada tababarada ee Beledwenye.
Max’ed Siyaad Bare Markii tababarki uu dhamaaday waxaa loo soo bedelay Magaalada Muqdisho, waxaana la keenay si uu tababaro dheeri ah oo ciidanimo ugu sii qaato Xeradii Ciidamada ee ku taalay degmada Xamar Jajab ee Magaalada Muqdisho. Max’ed Siyaad Bare wuxuu ka tagay howshii ciidanimada 1939-kii, kaddib markii loo soo sheegay geeridii laba adeeradiis ah oo kale ahaa Jaamac Bare iyo Maxamed Bare wuxuuna aaday deegaanka Ulasan ee ka tirsan Degmada Dhuusamareeb oo cidiisu degenaayeen.
1960-kii, waxaa la dhisay Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliya uuna hogaaminaayay Generaalkii sida aadka ah loo jeclaa Generaal Daauud C/laahi Xersi oo markii uu geeriyooday sanadkii 1965tii uu bedelay oo jagadiisii qabtay General Max’ed Siyaad Bare asigoo noqday taliyihii Xooga Dalka Soomaaliya (XDS) isagoo xukunka hayay mudo 21 sano ah, wuxuuna ku geeriyooday Dalka Nayjeeriya oo uu magangalyo ku joogay ilaa iyo sanadkii 1995-tii.
Max’ed Siyaad Bare hooyadiis waxaa la oran jiray Shaqlan Warfaa, waxeyna geeriyootay asagoo sideed jir ah, aabihiisna wuxuu geeriyooday 2 sano kaddib Max’ed Siyaad Bare oo 10 jir ah, waxaana soo koriyay aderkiis Xirsi Bare iyo ayeeydiis Sacdiyo, wuxuuna ahaa curudka aabihiis Siyaad Bare oo lagu naaneesi jiray “Siyaad Garba Weyne”, inkastoo ay dadkii yaqaanay Max’ed Siyaad Bare ay sheegeen in aabihiis Siyaad Bare lagu dilay dagaal qabiil uuna ahaa abaanduulihii colkaas. Waxaa Radio Muqdisho iyo Wargeysyada Kacaankuba ay qori jireen in uu Siyaad Bare ahaa halgamaa weyn uuna ka mid ahaa Ciidamadii uu hogaaminaayay Cumar Samatar oo gumeysigii Talyaanigu la dagaalamayay una ku shahiiday aagga Ceel Mirikh oo ku yaalo deegaanka Dhuusamareeb 1930-kii .
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Siyaad_Barre&oldid=231264"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 23 Febraayo 2022, marka ee eheed 08:53.